DLULA Iphakethe Lezitimela Ze-Albatros ze-Albatros Zempi FSX & P3D - Rikoooo
Play 24 584
Umbhali: Mohammad Faali
I Aero L-39 Albatros kuyinto ephezulu ukusebenza jet umqeqeshi izindiza athuthukiswe eCzechoslovakia ukuze kuhlangatshezwane nezidingo "C-39" (C cvičný - Umqeqeshi) ngesikhathi 1960s ukuba esikhundleni L-29 Delfin. Kwakuwusuku lokuqala lesibili isizukulwane jet abaqeqeshi, futhi umqeqeshi uqale turbofan-powered kukhiqizwa, futhi kamuva olusha njengoba L-59 Super Albatros futhi njengoba L-139 (sibonelo L-39 ne Garrett TFE731 injini).
A ukuqhubeka design, uJehova-159 ALCA, waqala ukunyathelisa ngo-1997. Kuze kube manje, bangaphezu kuka-2,800 L-39s abaye bakhonza nge phezu 30 air amabutho emhlabeni wonke. I Albatros iyona esetshenziswa kakhulu jet umqeqeshi emhlabeni; ngaphezu kokwenza ukuqeqeshwa okuyisisekelo sezihambile umshayeli, buye zafinyelela combat ukuthula indima ukukhanya-attack. Atypically, ungalokothi uye wathola NATO igama nokubika.
Isengezo esihle kakhulu nge-modeli esezingeni eliphakeme, imisindo yangokwezifiso, i-VC enamakhompiyutha kanye nokushintshwa (akukho 2D iphaneli), kufakwe nokubuyiswa kwe-3: I-Czech Air Force, Air Force neLituanian Biele Albatrosy. Iyahambisana FSX futhi Prepar3D (ukulungisa i-canopy.bmp ukuthungwa)